HomeOctober 11, 2019
Permalink October 11, 2019
Karachi, Shabbir Tiles and Ceramics Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 25, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended September 30, 2019. Furt ...
Karachi, Drekkar Kingsway Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 25, 2019 at Islamabad. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended September 30, 2019. Further, the ...
Karachi, Ibrahim Fibres Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 21, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended September 30, 2019. Further, the comp ...
Karachi, Service Fabrics Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on October 25, 2019 at Islamabad. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended September 30, 2019. Further, the ...